Gmail မေးဖွင့်မရတော့လို့ ကူညီကြပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » Gmail မေးဖွင့်မရတော့လို့ ကူညီကြပါ [Problem]
1 Gmail မေးဖွင့်မရတော့လို့ ကူညီကြပါ [Problem] on 8th October 2010, 12:44 pm
ကျွန်တော့်မေးအကောင့်တစ်ခု log in ၀င်လိုက်တာ
If you're having trouble receivingaverification code
ဆိုပြီးပေါ်နေတယ် ပြသနာဘဲဗျာ ကျွန်တော့်account ထဲ hacker တွေရဲ့မေးတွေဝင်ပြီး google ကများ မသင်္ကာလို့ပိတ်ထားတာထင်တယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိရင်ကူညီကြပါဦးဗျာ အဲဒီမေးကို မဖွင့်ဖြစ်တာတောင်ကြာပြီ။ ဆိုင်မှာလဲ သွားမသုံးဖြစ်ပါဘူး။ သူပြောသလို Country & Phone number တွေထည့်ပေးပေမယ့် မြန်မာပြန်ရဲ့ဖုံးတွေကို support မလုပ်ဘူးပြောနေတယ်။
2 Re: Gmail မေးဖွင့်မရတော့လို့ ကူညီကြပါ [Problem] on 8th October 2010, 8:21 pm
Gtalk နဲ ့ဝင်ရင်ကော ရလား။
3 Re: Gmail မေးဖွင့်မရတော့လို့ ကူညီကြပါ [Problem] on 9th October 2010, 9:20 am
ကိုထက်နိုင်ရေ Gtalk နဲ့ဝင်မကြည့်ဖြစ်လိုက်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်လဲ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ထိုင်း AIT မှာကျောင်းတက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ဖုံးကိုသုံးပြီး Verify code ပြန်ယူလိုက်တော့ မေးကအခုပြန်ရနေပြီ။ ဒါပေမယ့် Gmail, Gtalk သုံးသူတိုင်း နိုင်ငံခြားမှာ အသိမိတ်ဆွေရှိနိုင်ပါ့မလား ရှိရင်ရော အလွယ်တကူ အဆင်ပြေပြေကူညီနိုင်ပါ့မလား။ အဲဒီလိုအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာတော့ အရမ်းသိချင်တယ်ဗျာ။
4 Re: Gmail မေးဖွင့်မရတော့လို့ ကူညီကြပါ [Problem] on 9th October 2010, 11:35 am
မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းရှိလို ့...နို ့မို ့ဆို လွယ်ဘူး.။
Password ခဏခဏ ချိန်း..။ Password ခဏခဏ မှားပြီးရိုက်..
ကြာရင်ဖုန်းနံပတ်တောင်းကော အဲတာလေးတွေလဲ သတိထားသင့်တယ်.
ဖုန်းနံပတ်တောင်းတဲ့ Error ကတော့ ဖုန်းရှိမှပဲ ရမယ်နော်..
နိုင်ငံဂျား မှာ မိတ်ဆွေမရှိရင်တော့....ဒေဝါလီ သာမှတ်ပေတော့
5 Re: Gmail မေးဖွင့်မရတော့လို့ ကူညီကြပါ [Problem] on 10th October 2010, 7:31 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-08-17
[You must be registered and logged in to see this link.] ကို အက်လိုက်ပါ... အကို့ အခက်အခဲကို ကူညီပေးပါမယ်.. ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့....
6 Re: Gmail မေးဖွင့်မရတော့လို့ ကူညီကြပါ [Problem]